အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: March 2011
Posted by တီချမ်း at 6:49 AM No comments: Links to this post
ဒီလိုလေ အစက သေချာရေးမယ် ဆိုတာ မင်းင်္သိခ လိုလို တနေ့သော အခါ မြေလတ်မြို့တနေရာဝယ်ကနေစရမလား ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်း လို မိုးရွာပြီးစ မြေသင်းနံ့ကလေးနဲ့ စရမလား သော်တာဆွေလို ကျတော် မြင်းလှည်းမောင်းတဲ့အချိန်က နဲ့ စရမလား...ကိုတာရာလို တေးသွားများပျံလွင့်လာသည် နဲ့ စရမလား မင်းခိုက်စိုးစံ လိုမြူမှုန်များ ကျလာသော အကာလ ညအခါဝယ်နဲ့ စရမလား....စသဖြင့်ပေါ့ တွေးနေတာနဲ့ ကြာနေတာ အဲ့တာနဲ့ ပဲ အန်တီချမ်း လိုပဲ အစကတော့ နဲ့ စလိုက်တယ် ပြီးရော...ဘာမှသေချာမချက်စားဖြစ်တာလဲ ကြာပါပြီ စာလဲကောင်းကောင်းမရေးဖြစ်တာကြာပြီ ဘာမှသေချာမလုပ်ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ် တနှစ်မှာ ၃ခါလောက် တခါကို ၄ လလောက် အဲ့လိုပဲ ဘာမှ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိဘဲ စိတ်လေနေတတ်တယ်.....တလောက ညဘက်ကြီး မနက်ပေါ့ ၃ နာရီလောက် ပန်းဈေး ကိုသွားတယ်(နန်းတော် မြဘုရားနားမှာ) ပန်းဈေးကနေ ဆက်သွားရင် အသီးအရွက်တွေ ဘာတွေ လက်လီလက်ကားရောင်းတဲ့နေရာရှိတယ် အများစုက အင်ပိုထ့်တွေပါ ကိုက်လန်တို့ မှုန်ညှင်းတို့ ထိုင်ဝမ်ဘက်ကလာတာတွေရောင်းတယ် မှိုလဲပေါပေါရတယ် ကီလိုလိုက် ဆိုရင် စားပါလေ့ပဲ
တခါတခါ စိတ်ကူးပေါက်ရင် ညဘက် အဲ့ကိုသွားတတ်တယ်။ အဲ့နေ့ကလဲ ရောက်တော့ မှိုတွေ တွေ့တာနဲ့ဝယ်လာဖြစ်တယ် ဆိုက် နှစ်ဆိုက် ကီလိုဝက်ဆီ (နောက်နေ့ကျတော့ ရေခဲသေတ္တာ၉ သိပ်မသစ်)ထဲထည့်ထားတာတောင် အရည်တွေထွက်ပြီးမဲကုန်တယ် မှိုတွေက ဆေးပြီးရောင်းတာလေ...ထားတော့ နောက် ပန်းငရုတ်တွေ တွေ့တာနဲ့မောင်က ကြော်စားချင်တယ်ဆိုပြီး ဝယ်လာတယ် ကိုယ်ကတော့ မကြိုက် ငရုတ်ပွတော့စားတယ်....
နောက်နေ့ကျတော့ ပန်းငရုတ်နဲ့ မှို ကိုရောကြော်မယ်တဲ့ ကိုယ်က မှို ကိုကြော်ချက်ကလေးစားချင်တာနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ခိုင်းတယ် ငရုတ်သီးစိမ်းလဲ အဲ့ကနေပဲ ဝယ်တာ ဘတ် ၂၀ ဖိုး ကို တအိတ်ကြီးရတယ်....မောင့်ကိုတောင် ပြောဖြစ်သေးတယ် အဲ့ကနေ ကီလိုလိုက်ဝယ်ပြီး ကိုယ်တို့နားမှာ ဘန်းလေးနဲ့ ပြန်ထိုင်ရောင်းရင်တောင် တော်တော်မြတ်မယ်လို့ကိုယ်တို့နားက ဈေးလေးက နည်းနည်းဈေးကြီးတယ်။ထားပါတော့ ပြောရင်းနဲ့ တီချမ်းထုံးစံ ဘေးရောက်ပြန်ပြီ....
ဒီမှာ ခုနက ပြောထားသလို ဆားလေးနဲ့ ဆီလေးဆမ်းပြီးနယ်ထားတာပါ မှိုက ပါတယ်ဆိုရုံပဲ ထည့်စားတာ အဓိက က ခုနက ပြောသလို ဝက်သားပြုတ်ကြော်လေး ကိုထမင်းပူပူလေးနဲ့ စားချင်တာ တခါတခါ ကိုယ်စားချင်တာကိုလုပ်စားရတာ အင်မတန်မှကို အရသာရှိပါတယ် ဟင်းချက်ပျင်းတဲ့ ဒေါ်ရီတာ တို့ မမကွမ်တို့တော့ ငတ်တာပေါ့အေ.............
ပြောထားတယ်လေ ဘောနပ်စ် ပါဆို......................
ခုတော့ ၆ နာရီ ခွဲပြီ ၈ နာရီခွဲလောက်ကျရင် လေဆိပ် ဆင်းမှာ ကော်ဖီသောက် လိုက်အုံးမယ် နော်...ပြီး မှ မောင်ထည့်ပေးထားတဲ့ အိပ်ကို ပြန်စစ်ကြည့်ရမယ် နောက် ဘတ်စရာ စာအုပ်လေးဘာလေးပြင်မယ်
Posted by တီချမ်း at 1:16 AM2comments: Links to this post
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အချိုချက်, အတို့အမြုပ်, အရွက်ကြော်, အသုပ်များ
Posted by တီချမ်း at 6:46 AM3comments: Links to this post
ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ရွေးချယ်မှု ကြားမှာ
Posted by တီချမ်း at 6:41 AM No comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 10:50 AM3comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 6:36 AM 1 comment: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 6:26 AM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 6:21 AM No comments: Links to this post
အသိ နဲ့ သတ္တိ ရှိတယ်ပဲ ဆိုကြပါစို့
Posted by တီချမ်း at 6:18 AM2comments: Links to this post
တချို့မိန်းမတွေ အမြဲလိုလို လင်ယောက်ျား ဒါမှမဟုတ် သူတို့ ရဲ့ ရည်းစားတွေက သူတို့ ကို ဘာမှမပြောပြဘူးလို့ ညည်းလေ့ရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့လိုဖြစ်ရတာ အဲ့ဒီ မိန်းမတွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်ခဲ့လို့ပဲ ဆိုတာတော့ သူတို့ ကိုယ်သူတို့မသိကြဘူး။
ဥပမာပေးရရင် ယောက်ျားက အားရဝမ်းသာနဲ့ အကြောင်းအရာတခု ကိုပြောဖို့ စကားစတယ်ဆိုပါစို့…
“ဟေ့ တနေ့က မောင်သန့်တို့ နဲ့ အရက်သွားသောက်ကြတုံးက…” လို့ပြောတုံးရှိသေးတယ်။ ချက်ချင်းလိုလုို မိန်းမ လုပ်သူက “ဘာ…ရှင်ဘယ်တုံးက မောင်သန့် တို့နဲ့ အရက်သွားသောက်ပြန်ပလဲ။ ကျမ က ဘာကိစ္စ မသိရတာလဲ?” လို့ချက်ချင်း ပါးစပ် စက်သေနတ်ပစ်ပါတော့တယ်။
ယောက်ျားက စိတ်ပျက် လက်ပျက်နဲ့ “ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါကလေကွာ….” လို့လေပြေထိုးရုံရှိသေး မိန်းမက အင်္ဂါနေ့ဆိုတဲ့ လေသံကြားတာနဲ့ “ဘာ…ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါက ရှင်ကျုပ်ကိုပြောတော့ အိုဗာတိုင်ဆို” လို့တရစပ် တရားခံစစ်သလိုစစ်ပါတော့တယ်။ အစက မိန်းမကုို အေးအေးဆေးဆေး အဲ့ဒီ အင်္ဂါက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကိစ္စဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်၊ ရယ်စရာ ဟာသ တခုခုဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ် ပြောပြပြီး လင်မယား နှစ်ယောက် တူတူ ပြောဟယ် ဆိုဟယ် ရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ယောက်ျားခမျာ ဘာကိုမှပြောချင်စိတ်မရှိတော့အောင် ဖြစ်သွားတော့တာပဲ။
အဲ့တာတောင် မိန်းမ က အခြေအနေ ကို သဘောမပေါက်သေးပဲ…ဆက်ပြီး“မောင်သန့် အပြင် ဘယ်သူတွေပါသေးသလဲ? မိန်းမတွေရော ပါသေးသလား? ရှင်တို့ဘယ်ဆိုင်မှာ အရည်သွားဆို့ ကြတာလဲ” လို့ဆက်ပြီး ပါးစပ်ပေါက်ပေါက်ဖောက်ပါတော့တယ်။ ဒီအနေအထားကိုရောက်မှ တော့ ယောက်ျားခမျာလဲ လေလျော့ထားတဲ့ ဘောလုံးလို ပိန်လိမ်ရှုံ့တွပြီးတော့ နောက်ကို ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီိလို ပစိပစပ် ရှည်တဲ့ မိန်းမကိုနောင် ဘယ်တော့မှ ဘာမှ ပြောတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြောချင်စိတ်လဲ ရှိ တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အစကတော့ လင်မယား အတူတူ စကားလေးဘာလေးပြော လေလေးဘာလေးကန်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကနေ နောက်ဆုံးတော့ တရားခံစစ်သလို အစစ်ခံရတော့ ယောက်ျားလဲ တော်တော်လေးနှာတင်းပြီး စိတ်ပျက်သွားမယ်။ မျှဝေမယ့်စိတ်ကူးက တရားခံစစ် အစစ် ခံလိုက်ရတော့ ရှင်းပြရတာနဲ့တင် စိတ်ကုန်စရာဖြစ်သွားမယ်။ နောက်ကိုလဲ ဘာလို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြဿနာမီးထွန်းရှာနေမလဲ ဘာမှမပြောဘဲနေရင် အအေးဆုံးလို့ တွေးမိသွားမယ်။
မိန်းမတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ယောက်ျားက ကိုယ့်ကို ဘာမဆို ပြောစေချင်တယ်ဆိုရင် သူက “တနေ့က ဟိုကောင်နဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်တယ်” လို့ပြောရင် “ဘယ်ကောင်နဲ့ လဲ” လို့ မမေးပါနဲ့။ “ဟိုတရက်က ဟိုကောင်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်သွားတာ” လို့ စကားစလာရင် “ဘယ်စားသောက်ဆိုင်မှာ စားတာလဲ”လို့မမေးပါနဲ့။ “ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က မောင်သန့် တို့နဲ့ အရက်သောက်ကြတုံးက” လို့ ပြောလာခဲ့ရင် “ဘယ်ရက်ကလဲ” လို့မမေးပါနဲ့။ ဘယ်သူနဲ့လဲ၊ ဘယ်နေရာမှာလဲ၊ ဘာသွားလုပ်တာလဲ၊ ဘယ်သူတွေပါသေးလဲ? စတဲ့ မေးခွန်းတွေက ဘာများအရေးပါလို့လဲ။ အရေးကြီးတာက လင်ရယ်မယားရယ် ကိုယ့်အကြောင်း သူ့အကြောင်းဝေမျှ ဖလှယ် စကားလေးဘာလေးပြောဆို ရင်းအေးဆေးသက်သာနေလို့ရတဲ့ အချိန်မှာ ဘာကိစ္စ တရားခံစစ်စစ်နေမလဲနော်။
တရားခံစစ်စစ်တယ်ဆိုတာ တရားသူကြီးလုပ်ရမယ့် ဝတ္တရားပဲ။ အလုပ်ပဲ။ မိန်းမတွေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်မှမဟုတ်တာ။ ထားလိုက်ပါ။
Posted by တီချမ်း at 3:38 PM 11 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 6:16 AM4comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 6:56 PM2comments: Links to this post
ပြောသာပြောရသာပါ ခုတော့လဲမြို့ကြီးပြကြီး အနေကြာလာလို့ သွေးကြီးတာလား ဘာလားတော့ မသိ။ ပြောမပြောချင်တော့ပါဘူးအေ။ တခါတလေတော့ လဲ ငတို့ပြည် ငတို့ရွာက အသီးစိမ်းလေးတွေ တမ်းတမိသား။ အဲ့သဟာနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပေါ့အေ..........
ငတို့ပြည်နဲ့ နယ်ချင်းကပ်နေတဲ့ နေရာက အရီးဒေး တို့ အဖွားဖဲ တို့ အလည်လာကြပါရောလား။ အဲ့သမှာ သတို့ ကို ရွာ ဘက်က အသီးစိမ်းလေး ဘာလေး ပေါ်ရင် ဆွဲခဲ့ကြအေတို့ရယ်ဆိုသော့ ခမျာများလဲ တွေ့တာ ဆွဲခဲ့ပေးကြသာပေါ့။ မရမ်းသီး စိမ်းလေးတွေက စိုမှစို၊ ဒညင်းသီးစိမ်းလေးတွေက လတ်မှလတ် ဆိုတော့ အိမ်က လူကြီးနဲ့ သိုင်ပင်ကြတော့ စိမ်စားကြမယ်ပေါ့။ အဲ့သဟာနဲ့.....တွေ့ကြတဲ့အတိုင်း မရမ်းသီး စိမ်းလေးတွေကို ရေစင်စင်ဆေး၊ နောက် ဗူးထဲမှာ ထည့်၊ ဟော ဆေးသကြားခဲလေးတွေ ကြိတ်ပြီး ထည့် ရေသန့်လေးတွေ ဖုံးရုံ လောင်းပေး နောက်တရက်နှစ်ရက်နေ့တော့ စားရရောပေါ့အေ။ ပြေအာရအုံးမယ် အဲ့ဒီ ဆေးသကြားဆိုသာကလဲ တို့တွေ ရွာမှာနေတုံးက အရပ်ထဲက ကုလားမဆိုင်ဝယ်မလား၊ တရုတ်မ ကုန်စုံဆိုင်ပြေးမလား ပေါလအောရပါ့အေ။ ခုတော့ ဒီမှာ မရှိလို့ အဲ့သည် အရီးဒေး တို့ မဲစောက် ကိုမှာရပါပကောလား။ ပြောပြောချင်ဘုအေ။ ကဲကဲ ပုံတွေကိုသာကြည့်သော့.......
ဆီပျံဟင်းလေးနဲ့ ထမင်းပူပူလေးနဲ့ ကုန်းလွှေးလိုက်ရရင်တော့လား..............အညာက အရီးတားတို့ အရီးကွမ်တို့ အဖွားလေး သူသူ တို့ အကုန်မေ့သွားမယ်
Posted by တီချမ်း at 2:01 PM9comments: Links to this post
Here by I attached the certificate from the group that we donated the computer, photo when my friends donating, and the receipt of the computer.
Total cost of the computer we bought is DELL brand, 499,000 kyat which is equivalent to 573.56 USD as of the exchange rate from yesterday.
The exchange rates we are using are for kyat is 870 per USD and for baht is 31.5 per USD as of yesterday (19th March 2011 Saturday).
The amount that all my friends (including you) contributed are listed as below,
Ma Swe Zin Thet
I filled in for the rest.
Thanks for all those contributed, on behalf of the group I would like to say thanks and really appreciated it. Keep up the good deeds.
Posted by တီချမ်း at 12:20 PM 1 comment: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 2:04 AM5comments: Links to this post